उपत्यकाको निषेधाज्ञा : थप कडाइ, के-केमा लगाइयो रोक ? |
उपत्यकाको निषेधाज्ञा : थप कडाइ, के-केमा लगाइयो रोक ?
काठमाण्डाै१४जेष्ठ०७८/ कोभिड–१९ सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि भन्दै काठमाडौँ उपत्यकामा आजदेखि निषेधाज्ञामा थप कडाइ गर्दै एक साता लम्ब्याइएको छ । यही जेठ २० गते राति १२ बजेसम्मका लागि निषेधाज्ञा थप गरिएको हो । उपत्यकामा वैशाख १६ गतेदेखि उक्त आदेश जारी गरी अत्यावश्यकबाहेकका गतिविधिमा रोक लगाइएको थियो ।